'ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ကို အရမ်းချစ်တာကြောင့် မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေကလည်း ကျွန်တော့်ကို ချစ်?? - Yangon Media Group
‘ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ကို အရမ်းချစ်တာကြောင့် မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေကလည်း ကျွန်တော့်ကို ချစ်??
မြန်မာပြည်တွင်မွေးဖွားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကြီးပြင်းခဲ့ကာ ယခုအခါတွင် ပြည်တွင်းအနုပညာရှင်များနှင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လက်တွဲရိုက်ကူးခဲ့သော ”ဇာတိမြေ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီး တေးသံရှင်/သရုပ်ဆောင် မိုရီဆာကီဝင်းနှင့် ယခုလိုပဲ တွေ့ဆုံမေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး- မြန်မာပြည်ကပရိသတ်တွေက အဝင်းဆိုပြီးတော့ အရမ်းကို အားပေးကြတယ်။ မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေကဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလောက်ထိအားပေးတယ်လို့ ထင်လဲ။
ဖြေ- ဘာကြောင့် ကျွန်တော့်ကို မြန်မာ ပြည်ကပရိသတ်တွေ ချစ်ကြတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ ပြည်က ပရိသတ်တွေလောက် ကျွန်တော်ကလည်း မြန်မာပြည်ကို အရမ်းချစ်တာ ကြောင့်ပါ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော့်ကို မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေကချစ်ကြတာလို့ ကျွန်တော်ကတော့ လက်ခံထားပါတယ်။
မေး- ”ဇာတိမြေ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ထားတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့လည်း မိတ်ဆက် ပေးပါဦး။
ဖြေ- ဇာတိမြေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ကျွန် တော်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် အပြင်ကာရိုက်တာဖြစ်တဲ့ မိုရီဆာကီဝင်းရဲ့ ပုံစံနဲ့သိပ်တော့မကွာဘူးပေါ့ဗျာ။ ဂျပန်ကိုသွားပြီးတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်ကို ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ ကောင်လေးတစ် ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်ပါဝင်ထားပါတယ်။
မေး- ”ဇာတိမြေ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို လာကြည့်တဲ့ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီဇာတ်ကားကနေပြီးတော့ ဘယ်လိုအသိပညာမျိုးကို ရစေချင်တာမျိုးရှိလဲ။
ဖြေ- ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။ ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေအနေ နဲ့ ဘာမဆိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုကိုရစေချင်တယ်။ အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ရှိမိုရီဆာကီဝင်းက အောင်မြင်နေပြီလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက လူတစ် ယောက်ကဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို ဇွဲရှိရှိနဲ့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် အားလုံးက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ကပြောချင်တာပါ။
မေး- ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာဆိုရင် မြန်မာ ပြည်ကအနုပညာရှင်တွေအများကြီးနဲ့ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ခွင့်ရတာဆိုတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ ရော ခံစားချက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ- မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီးတော့ ဂျပန်ပြည်ကို ၁ဝ နှစ်သားကတည်းက ရောက်ခဲ့တယ်။ ဂျပန် ပြည်မှာ အလုပ်လုပ်မိဘတွေနဲ့အတူတူနေပါတယ်။ ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ အဘွားနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံး အဘွားကို ကျေးဇူးဆပ်တဲ့နေရာကို ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခြေခံလုပ်ခ အတည်ပြု နှုန်းထားသစ် မတ်လတွင် အတည်ပြုမည်
တောင်ကိုရီးယား ဝါရင့် မင်းသားနှစ်ဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရ
ဖီဖာ အကောင်းဆုံး ဆုအတွက် အာရုံများနေခြင်း မဟုတ်ဟု မိုဒရစ် ဆို၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို စွန့်ခွာရ?
တရုတ် နှစ်ကူးနောက်ပိုင်း ကျောက်ပုတီးစေ့ ဝယ်လက်အဝင် များလာသဖြင့် စစ်ကိုင်းဘော်ဂါ ကျောက်ဝို
နည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်း ပဲစင်းငုံ အိန္ဒိယဈေးကွက်ကိုသာ မှီခိုေ
ပြည်ထောင်စု အခွန်ကောက် ဥပဒေရေးဆွဲရန် လိုအပ်ချက်များအား အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်မျ
မုံရွာမြို့ ချင်းတွင်းသင်္ကြန်သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရပြည်နယ်မှ ဧည့်သည် ၁ဝဝဝ ကျော် လာရောက်
စာမျက်နှာသစ်(New Page)Season2ကို CANAL+ ရုပ်သံလိုင်းတွင် စတင်ပြသ
ရေဦးမြို့နယ်ရှိ အင်းဝခေတ် လက်ရာ နန်းမတော်မယ်နု အုတ်ကျောင်းအား ပြန်လည်ပြုပြင်နေ
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် နောင်ပိုအောင် ဒေသထွက် မြန်မာ့ရိုးရာ ဓားများ မှာယူမှုများပြား